Raschel Knitting Machine Design software/CAD Software For Karl Mayer Warp Knitting Machine factory and manufacturers | Grand Star
Raschel Knitting Machine Design software/CAD Software For Karl Mayer Warp Knitting Machine
Version: PROCAD 14.0.42
မူလအစရာ: ဖူ, တရုတ် (ပြည်မကြီး), အရောင်: No
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Grandstar(Procad) ပစ္စည်း: A Software with one dongle
ပို့ကုန်စျေးကွက်: ကမ္တာ့ အထုပ်: Carton box
လက်မှတ်: No အရည်အသွေး: အာမခံ
supply နိုင်ခြင်း: တစ်လလျှင် 50000 သတ်မှတ်ရန် / သတ်မှတ်ပေးသည်
Packaging Details: Carton box for Dongle
အရေအတွက် (သတ်မှတ်ပေးသည်) 1 – 100 >100
အီးအက်စ်တီ။ အချိန် (နေ့က) 10 ညှိနှိုင်းရမည့်
The CAD software below to Procad. It is easy using, easy learning, this CAD system has been widely used in warp knitting industry.
1.Jacquard CAD software ကိုပုအထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကွန်ပျူတာ-ကိုကူညီခဲ့ဒီဇိုင်းကို software ဖြစ်ပါသည်။
2.The ပြန်-အဆုံး software နှင့်အော်တိုတူးဖော်စက်သို့မဟုတ်စက်တွေနှင့်ကွန်ပျူတာဒေတာတွေကိုတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံ။
ထည် jacquard ယက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ 3.The အလိုအလျောက်ကိုအလွန်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ကိုက်ညှိထားသောထည်မျိုးပေါင်း widens ။
ယနေ့ကျယ်ပြန့်ယက်လုပ်ခြင်းစက်တွေရှိပါတယ်, ကွန်ပျူတာများကိုတစ်ဦး Front-အဆုံးဒီဇိုင်းအဖြစ်အကြီးစားလူကြိုက်များ Jacquard CAD software ကိုဒီထက်မက, ဒေတာများကိုယက်ပုံစံဒီထက်မက။
4.Jacquard CAD software ကို jacquard ယက်လုပ်ခြင်းစက်ရုံများမှမရှိမဖြစ်တဲ့ Front-အဆုံးဒီဇိုင်းရေးကိရိယာများအဖြစ်ချီးကျူးနိုင်ပါတယ်။
နေပါစေထည်, မူကြမ်း, နမူနာများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံအားလုံးအရောင်ခွဲထုတ်အားဖြင့်စံပြအကျိုးသက်ရောက်မှုရနိုငျသညျ, ထူးမြတ်သောအရောင်အ input ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
ဖူ Grandstar နည်းပညာ Co. , Ltd 2012 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့ဒါဟာအတိုင်ဇာထိုးစက်ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲတီထွင်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့စွမ်းရည်နှင့်အတူတစ်ဦး Hi-Tech မှကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတရုတ်ဖူမြို့ဖူပြည်နယ်မှာတည်ရှိပြီး
အရည်အသွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်စပ်ပစ္စည်း Piezo Jacquard ဘား (E12-E34), Jacquard ဘား Drive ကိုပြား, Jacquard bar ကိုပါဝါဘုတ်အဖွဲ့, CAD Software များစသည်တို့ကိုပါဝင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ပြည်တွင်းစျေးကွက်ထက်ပို 80% ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပြီးကျနော်တို့ပြီးသား 20 ကျော်နိုင်ငံများသို့တင်ပို့ကြသည်။
ငါတို့သည်လည်း Piezo အစားထိုးခြင်းဖြင့်ထိုကဲ့သို့သော Modify စက်တွေအဖြစ်အတိုင်ဇာထိုးစက်တွေပြုပြင်မွမ်းမံဖြေရှင်းချက်ပေး Jacquard စနစ် EBA / EBC စနစ် (အီလက်ထရောနစ်ပါစေ-off system ကို) ဖြည့်စွက်, Shogging (အီလက်ထရောနစ် Lateral သည့်စနစ်) စနစ်ထည့်သွင်းခြင်း, ဒါကြောင့်အပေါ် SU system ကိုအစားထိုးပါ။ ကျနော်တို့ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပနှစ်ခုစလုံးပြီးသားပြုပြင်မွမ်းမံစာရေးပြီ။
ယခင်: ချည်ခင် spool စက်ချည်မျှင်အပိုအစိတ်အပိုင်းများဖြုန်း
နောက်တစ်ခု: EL System Electronic Lateral System For Warp Knitting Machine
အီလက်ထရောနစ် Draw-OFF စနစ်
အီလက်ထရောနစ် Jacquard စနစ်
အီလက်ထရောနစ် Shogging စနစ်
အတိုင်သိုးမွှေးထိုး Jacquard စနစ်
EL System Electronic Lateral System For Warp Kn...
Piezo Jacquard System for Raschel Warp Knitting...
Camera System For Tricot Machine
Camera System For Warping Machine
Let-Off (EBA/EBC) System For Warp Knitting Machine